Xasan Sheekh oo gacan ku gambad ka ah Kooxda Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
Xasan Sheekh oo gacan ku gambad ka ah Kooxda Farmaajo
Farmaajo iyo kooxdiisu, waxa ay u diyaar-garoobeen in ay laba-jibaaraan marin habaabintoodii shacabka, indha bulshadana ka weeciyaan caleemo-saarka Madaxweynaha, halka Xasan Sheekh uu gacan ku ganbad yahay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xilli loo diyaar garoobayo in khamiista berri ah uu dhaco caleema-saarka Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud, ayay kooxda dacaayadda u qaabilsan Madaxweynihii hore Farmaajo billaabeen olole ay ku doonayaan in ay ku abuuraan hadal heyn baraha bulshada ah, si hoos loogu dhigo hadal heynta caleema-saarka.
Kooxdaan waxaa ay todobaadkii hore ku dhawaaqeen olole ay ugu magac dareen, “Mahadsanid Madaxweyne”, kaasoo ay sheegeen in ay guri abaalmarin ah ugu dhisayaan Farmaajo, isla-markaana lacag looga aruurinayo taageerayaashiisa, hayeeshee, u jeedka rasmiga ayaan ahayn dhisid guri iyo abaal marin Madaxweyne midna.
Farmaajo lacag la’aan ma heyso, umana baahna lacag shacab laga aruuriyay, sababtoo ah intii uu xafiiska joogay in ka badan 1.7 bilayan, ayaa xisaab-xir la’aan ugu maqan, halka uu sanad kasta hanti-dhowka guud soo saarayay malaayiin doolar oo aan la aqoon wax loo isticmaalay, waana Millionaire boobay hanti dadweyne shantii sano ee la so dhaafay.
Hayeeshee, u jeedka loo abaabulayo taageerayaashiisa, ayaa ah in la abuuro hadal heyn lagu qarinayo, Caleema-saarka, isla-markaana shaqsiyaad ay ugu horreeyaan, Cali Yare, Cabdirashiid Duqa iyo Cabdi Xirsi, ku dhacayaan lacagta shacabka, si la mid ah taageerayashii Madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka Donald Tramp.
Abaabulka taageerayaasha ee ka socda baraha bulshada iyo kulamada ka dhacaya Twitter Space, waxaa lagu sii daray wareysiyo ay bixinayaan labo ka mid ah shaqsiyaadka galay gabood-fallada ugu badan intii uu xafiiska joogay Farmaajo, kuwaas oo kala ah, Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Farey oo aan noloshooda hore wareysi u bixin.
Xalay waxaa la baahiyay wareysi laga qaaday Farey oo ka mid ah dadka ku eedeyaan kiiska Ikraan Tahliil, halka wareysiga Fahad lagu soo aaddinayo saacado hor caleema-saarka, si indhaha bulshada meel kale loogu weeciyo, waxayna labada wareysi ka sinnaan doonaan su’aalo tifaftiran oo la-xisaabtankii saxaafaddu ka maqan tahay.
Maamulka Xasan Sheekh, waxa ay ahayd inuu la xisaabtamo shakhsiyaadka eedeysan ee Fahad iyo Farey ugu horreeyaan, sidoo kale, waxa ay ahayd inuu ka hor tago, shaqsiyaadka bulshada marin habaabinaya ee Cali iyo Cabdirashiid ugu horreeyaan, nasiib-xubo isaga ayaa u muuqda gacan ku gambad isaga oo aan la caleema-saarin laga horkeenay shacabka.